ချင်းစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ အောက်မီးလက်ဝကျေးရွာ မီးလော...
27 พ.ค. 2563 - 15:07 น.
ချင်းပြည်နယ်၊ ပလက်ဝမြို့နယ်တွင်းက အောက်မီးလက်ဝကျေးရွာမှာ မေ ၂၆ ရက်နေ့က မီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရွာကိုစွန့်ပြေးခဲ့ရတဲ့ အောက်မီးလက်ဝရွာသားတွေက ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
အိမ်ခြေ ၂၀၀ ကျော်ရှိပြီး လူဦးရေ ၆၀၀ နီးပါးနေထိုင်ခဲ့တဲ့ အောက်မီးလက်ဝကျေးရွာက ဒေသခံတွေဟာ မြန်မာ့တပ်မတော်နဲ့ အေအေတို့အကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့ တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လ ဝန်းကျင်ကတည်းက နေအိမ်တွေကိုစွန့်ကာ ရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
' ' ရွာမီးလောင်တာကို မနေ့က မွန်းလွဲပိုင်း ၂နာရီ ၄၀ လောက်မှ စပြီးသိတာ။ မီးငြှိမ်းဖို့ ရွာသားတွေစုပြီး သွားကြတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပါတယ်။ လှေနဲ့သွားတာ ဟိုကိုရောက်တဲ့ အချိန် ရွာကိုတက်လို့မရဘူး။ လက်နက်ငယ်နဲ့ပစ်တယ်။ ၇ ကြိမ် ၉ကြိမ်လောက်ရှိမယ်။ သွားလို့မရဘူး။ ရွာမှာကျန်ခဲ့တာတွေတော့ ဘာတစ်ခုမှကျွန်တော်တို့ပြန်မရတော့ဘူး''လို့ ပလက်ဝမြို့ပေါ်ကျောင်းတစ်ခုမှာနေထိုင်နေရတဲ့ အောက်မီးလက်ဝရွာသားတစ်ဦးက ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
ကလေး ၁ ဦး အပါအဝင် လူ ၃ ဦးသေဆုံးတဲ့ ပလက်ဝ ခရီးသည် စက်လှေ ပစ်ခတ်မှု တပ်နဲ့ အေအေ အပြန်အလှန် စွပ်စွဲ
ရွာမီးလောင်ရတဲ့အပေါ်မှာတော့ မြန်မာ့တပ်မတော်ဘက်က ရက္ခိုင့်တပ်တော်( အေအေ)ကရှို့တာလို့ မီဒီယာအချို့မှာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်။
မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အောက်မီးလက်၀ကျေးရွာအနီးမှာ မြန်မာ့တပ်မတော်ရော အေအေဘက်က လှုပ်ရှားသွားလာမှုတွေရှိသလို တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ ဒေသခံအချို့ ကပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ရွာမီးလောင်မှုဟာ ဘယ်ဘက်ကြောင့်ဆိုတာမျိုး မခန့်မှန်းနိုင်သလို ဘယ်ဘက်ကလုပ်တာဖြစ်နိုင်သလဲဆိုတာကိုမျိုးကိုတောင် မဖြေကြားရဲဘူးလို့ ဒေသခံတွေက ငြင်းဆန်ကြပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၁ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ကလေးငယ် ၁ဦးအပါအဝင် လူ၃ဦးသေဆုံးစေခဲ့တဲ့ ပလက်ဝခရီးသည်စက်လှေပစ်ခတ်မှုတုံးကလည်း တပ်နဲ့အေအေတို့အကြား အပြန်အလှန် စွပ်စွဲ ပြစ်တင်တာတွေရှိခဲ့ပြီး ဘယ်ဘက်ကပစ်ခတ်တယ်ဆိုတာမျိုးအဖြေမထွက်ခဲ့ပါဘူး။
ဒီလိုအခြေအနေကြားမှာပဲချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့နယ်အတွင်း တိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဆိုသလို ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့် နေအိမ်တွေစွန့်ခွာပြေးနေရသူတွေလည်း တိုးမြှင့်လာနေပါတယ်။
' ' ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကဆိုလည်း လက်နက်ကြီးကျလာလို့ ကျွန်တော့်အိမ်နောက်ဖေးဆောင် မီးလောင်သွားတယ်။ တိုက်ပွဲတွေက မြို့ပေါ်ထိမဖြစ်သေးပေမယ့် ပတ်ပတ်လည်မှာဖြစ်နေတော့ လက်နက်ကြီးကျတာတွေကလည်းရှိနေတယ်'' လို့ ပလက်ဝမြို့ပေါ်မှာ နေထိုင်တဲ့ စစ်ရှောင်ကူညီရေးကော်မတီဝင်တစ်ဦးကပြောပါတယ်။
မြန်မာ့တပ်မတော်နဲ့ အေအေတို့အကြား ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ပိတ်မိနေတဲ့ ရွာတွေလည်းရှိနေပြီး ဆန်ရိက္ခာထောက်ပံ့သူတွေရှိနေပေမယ့်လည်း သွားလာမရတာကြောင့် မထောက်ပံ့နိုင်လို့ အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ရွာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ စစ်ရှောင်ကူညီရေးကော်မတီဝင်အချို့ကပြောပါတယ်။
' 'လာထောက်ပံ့ထားတာတွေရှိတာကြောင့် နောက်တပတ်စာလောက်အထိကတော့ စားဖို့ရှိသေးတယ်။ နောက်ပိုင်းတော့ လူကြီးတွေက ဘယ်လိုစီစဉ်ပေးကြမလဲမသိသေးဘူး''လို့ ပလက်ဝမြို့ပေါ်မှာ စစ်ဘေးရှောင်ရင်းနေထိုင်နေရတဲ့ အောက်မီးလက်ဝရွာသားတစ်ဦးကပြောပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ချင်းစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ အောက်မီးလက်ဝကျေးရွာ မီးလောင်၊ မီးငြှိမ်းခွင့်မရခဲ့